Munamato kuna Saint Cyprian. ? Kudzivirirwa, Tie, Tame uye kutonga
Munamato kuSan Cipriano. Iye anozivikanwa nekuve nemasimba mazhinji ekudenga. Ita izvo munamato kuna St. Cyprian chengetedzo, kusunga tutu uye kutonga kunogona kutibatsira mumamiriro mazhinji ehupenyu.
Kunyanya mune izvo zviitiko apo isu tinofunga kuti hapana mhinduro. Nyanzvi mukugadzirisa matambudziko evavakaroorana apo mumwe wemapato anosarudza kubva pamubhedha chero chikonzero.
Nekudaro, masimba avo anogona kutibatsira kuti tinzwe takachengetedzwa kana kubudirira. The minamato vanogara vane simba uye kana iwe ukaisa mavari kutenda kwese kuti une chishamiso hakutore nguva kuti usvike kwatiri.
Zvino, chakavanzika chinozotiunzira mabhenefiti ekuziva kuti Munyengetero unofanira kunangidzirwa kunaani.
Imwe neimwe inonyanya kushanda kana kushoma zvichienderana nemhosva yatinokumbira rubatsiro.
Mune ino San Sanopriano ine simba uye inogona kutibatsira mune zviitiko kuti isu tinoda kuomesa uye kutonga mumwe munhu kana mamwe mamiriro.
1 Chinangwa chemunamato weSt
1.1 Namata kuna St. Cyprian kuti undifonere
1.2 Munamato kuna Saint Cyprian wekudzivirira
1.3 Munamato kune Saipro Sachigaro kusungira, tame uye kutonga
2 Ndinogona kutaura minamato yacho pamwechete here?
Chinangwa chemunamato weSt
San Cipriano inobatsira vanhu mune chero zvese muhupenyu hwavo.
Munyaya ino yese ticharatidza kanosvika mana zvirevo nezvakasiyana.
Minamato yacho ichashandira:
Sunga, unonamira uye dzora rudo;
Mari uye kubudirira.
Chaizvoizvo, iyi minamato ichashandira zvese zvikamu zvehupenyu hwako, kubva pamari kune rudo.
Kuti uve nemhedzisiro yakanakisa iwe unongofanira chete kunamatira nekutenda uye uchigara uchitenda musimba reSt. Cyprian.
Namata kuna St. Cyprian kuti undifonere
Mutsvene eCyprian, akaropafadzwa pakati pevatsvene, ndinokumbira tsitsi dzako
Ita (...) kunzwa kuti unondida padhuze, kuti haugone kumira kusavapo kwangu uye undishevedze. Gadzira foni yangu kurira uye ndinonzwa izwi re (...) kune rimwe divi.
Saint Cyprian, Wemasimbaose mubatsiri, ndipeiwo ichi chishuwo chiri nyore, teerera kune izwi rakapfava re (...) Uye ugone kuzvinzwa, unakirwe naro uye unamate naro zvakare. San Cipriano, anogamuchira (...) kundidaidza, chero pandinenge ndiri uye izvozvi.
Ndiite ndifonere foni yangu nekuti urikuda kunditeerera uye kuseka kana kuchema padhuze neni.
Wadiwa San Cripriano, mukukura kwako kukuru ndinokutenda uye semuranda anozvininipisa ndichawaridza mbiri yako kwese kwandinoenda.
Saka ngazvive. Uye saka zvichave saizvozvo.
Munamato uyu unogona kuitwa muzvinhu zvakati wandei, kungave kuita kuyanana nemunhu iyeye kana kutanga hukama.
Zviri kuti kunyange kudoma bhizinesi mutsara uyu unoshanda.
Izvo zvakakosha kuti zita remunhu watinoda kuti utidane uye zvinangwa zvatiri kuda kuti kufona kuchitaurwe.
Kana isu tisina izvo zvakajeka, isu tinogona kutanga taronga nekuti munamato une simba rakanyanya uye zvakanaka kuzviita kana zvese zvakajeka kuti urege kubvunza zvisizvo.
Kuvhenekesa makenduru kana kusazviita nenguva inoitwa munamato uyu zvinoenderana nemunhu, izvo zvinokurudzirwa ndezvekuti unotora nguva yekuisa pfungwa dzako pamunamato.
Hatigone kunyengetera kana pfungwa dziri mune chimwe chinhu, tinofanira kutarisa pazvikumbiro zvinoitwa kuti tikwanise kubvunza izvo zvavanoda.
Munamato kuna St. Cyprian dziviriro
Virtuosísimo San Cipriano, Bhishopi weKorinde, ndinokukumbira iwe nerudo runopikiswa naShe Jesu Kristu pamusoro pako, ndisunungure pakurwiswa komuvengi akaipa, murege kuti anditsamwira.
Ndiponesei parufu nekukurumidza, madutu, mheni, moto, uye vavakidzani vakavhiringidzika. Kana ndikawira mutirongo, ndinyaradzei uye ndibatsireiwo kubva mairi nerukudzo, uye musoro wangu wakasimudzwa.
Zvevanhu vane godo nevakaipa, ndibvisei.
Uye nenguvo dzako vandifukidze munjodzi dzese dzinouya pamberi pangu, nekuti kubudikidza nekureverera kwako ndinobvunza ndakazvipira Utatu Hutsvene, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana uye Mwari Mweya Mutsvene.
Iyi ndeimwe yemafungiro anogara achiitika mukati memunhu, kungave kwe bvunza kuchengetedzwa isu kana kuti wemhuri, San Cipriano ndiye Musiki anogona kutipa chikumbiro ichi.
Anodzivirira ane simba mune zvese zviitiko.
Munamato weSanta Cyprian wekudzivirira unofanirwa kutanga waitwa uchiziva simba reStiyprian Kutichengetedza, ipapo kuchengetedzwa kunofanirwa kukumbirwa zvakanyatsojeka sezvinobvira, pasina tsvina zhinji.
Ikozvino, mune yekupedzisira nhanho, rutendo rwunopihwa nekuda kwechishamiso chekudzivirira sechiratidzo chekutenda. Nenzira iyi tinosimbisa munamato une simba kuti tiwane kuchengetedzwa nguva dzese.
Munamato kune Saipro Sachigaro kusungira, tame uye kutonga
“Simba rako guru, o, Musande mukuru weCyprian, muapositori weavo vanotambura nekuda kwerudo, dai simba rako risingaenzaniswi vandiitire ini, zvandinoshuvira nhasi.
Ita muzita rekuzvipira kwangu kuzita rako, o! Miranda inoshamisa yangu uye yeavo vanoshaiwa, izvo (taura zita rauri kuda) kutendeukira kwandiri, muviri nemweya uye kuti hapana mumwe wake / wake kupfuura ini.
Kuti anondida uye anondiona kuburikidza nemeso angu uye anonditsvaga pese pese kunyangwe achiziva kuti haapo, kuti anondishuvira, nekuti anogara ari padivi neni uye anozvimbundira netariro yekuve mumubhedha wangu, patafura yangu uye zviroto zvangu
Ah, ane simba muapostora, iwe waive muroyi mune zvishamiso zvako uye hutsvene muhutsvene hwako, usandisiya izvozvi!
Ini ndinoda Chiedza chako, Chiedza chisina kujairika, Chiedza chinoshamisa, kutyaira icho kupenga chinondipedza tariro yekuve wake nekusingaperi.
Ngaaswedere pedyo nhasi kuti andipe uranda hwake mukutendeka kunzwa uye nyoro uye nyoro mweya, oh! Ishe kuti munzwe zvese, musandisiye mune ino nhanho nenhamo iyi yekunzwa kubatsirwa / kana pasina rudo rwake uye pasina kudziya kwake.
Izvi zvinouya kune zviroto zvangu uye chokwadi changu nezvipikirwa kuzadzisa uye nezvishuwo kuti ndichaita kuti zviitike. Mutsvene Cyprian, nditeerere, mukati kupisa kwemunamato uyu, chikumbiro changu chinoenda!
Ndiunzire kune icho chinhu kuti ini ndinoda, ikozvino chiuya nacho kwandiri nekuti ini ndinopera ndisina kuvapo kwake, ndapota, musande anoshamisa ... teerera kumunamato wangu, pamwe chete naJustina wako shamwari uye musanganiswa wemukadzi, uyo newe unofamba nebasa rako rakachena kune vese avo tinobvunza ...
Huku hwakanaka, nditeerere! ... Ameni. "
Kuwana izvi zvitatu zvinoitika pamunhu kanenge kane chishamiso.
Ichi chikonzero nei paine munamato wakasarudzika we zviite zvinobudirira uye nekupedzisira.
Iye zvino unofanirwa kuve nekuziva kwazvo nezvezvinangwa zvako, chengeta mumwe munhu padivi pako simba kana kumuita kuti aite zvatinoda hazvisi izvo zvakanakira hutano hwakareba hwevaviri
Nekudaro, iyi minamato ine simba zvekuti tinofanirwa kuzviita nemoyo wese.
Izvo zvakaringana sunga, tama uye utonge Murume, mukomana kana mukomana waanoziva. Inoshanda nemunhu wese.
Anodiwa uye anodiwa Saint Cyprian, ndinogutsikana nekunaka kwako kutsvene pamwe nekushingairira kwako uye kuzvipira kwako Kururamisira nashe wedu.
Kubva pane zvakaipa, uye nekunetseka, ndisunungure. Ndipe chikomborero chako uye gadzirisa mamiriro angu. Ini handikumbire lottery, kana mari yekukurumidza kusvika muzuva.
Basa rakanaka rinokwana ini kuti ndiwane mari mhuri yangu.
Oh Mutsvene Cyprian, nechikumbiro ichi chekuzvininipisa ndinotarisira kuwana chikomborero chako chekushandura ramangwana rangu uye rangu.
Munyika iri kuramba ichitambudzika, mari inova chishamiso kuti ive nayo uye kuitase mukuda.
Ndokusaka tichifanira kunyengetera munamato kuna St.
Kubvunza kuti mari inogara ichiyerera mumaoko edu iri sarudzo yakanaka yekuona budiriro mumabhizinesi ese atinoita.
Namata uye ubvunze San Cipriano kuti chishamiso chemari uye ushande kuitira kuti chishamiso chiuye nekukurumidza sezvinobvira, rangarira kuti hakusi kwekungonamata chete asi kuti uite izvo zvinogoneka kuti uite zvatinoda.
Ndinogona kutaura minamato yacho pamwechete here?
Chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji vanoda kubatsirwa nezvinhu zvakasiyana siyana muhupenyu hwavo. Kana izvi zvikaitika, mitsara yose iri muchinyorwa chino inofanira kunyengetera.
Unogona kunyengetera ese, asi kwete zuva rimwe chete. Tinokurudzira kuti usiye 1 zuva rekuzorora pakati pemunamato mumwe nemumwe.
Zvakakosha kuti usanamata kune iye mumwe chete musande zvinhu zvakasiyana pazuva rimwe chete, zvikasadaro iye anogona kusapinda chero yezvikumbiro.
Naizvozvo, namata munamato weSt. Cyprian kusungira, kuonda, kutonga uye kuchengetedza pamazuva akasiyana.
Munamato kuna Saint Nicholas weBari